YouTube मनपर्दो खरीदको फाइदा के हो?
यो मूल्यवान अवलोकन देखाउँदै अवधारण बढाउनुहोस्
मनपर्दो खोजी ईन्जिन दरबन्दी बढाउन मद्दत गर्दछ
१००% सुरक्षित र ग्यारेन्टी डेलिभरी
१००% AdSense Safe!
मनपर्‍यो वास्तविक व्यक्तिहरूबाट डेलिभर हुन्छन् - कुनै बट्स!
हामी सँधै तपाईलाई अर्डर गरिएको भन्दा बढि उद्धार गर्दछौं!
24-72 घण्टामा परिणामहरू देखा पर्न शुरू भयो
तपाईंको च्यानल बढाउन YouTube लाईकहरू खरिद गर्दा आवश्यक सुझावहरू
यसमा कुनै शंका छैन कि YouTube आज संसारको सबैभन्दा ठूलो भिडियो स्ट्रिमिङ सेवाहरू मध्ये एक हो। अनुसार क स्टिस्टा रिपोर्ट, एक सर्वेक्षणले संकेत गरेको छ कि US मा प्रयोगकर्ताहरूको ठूलो अनुपात (74%) ले आफ्नो अधिकांश समय YouTube मा बिताउँछ। यो एक प्लेटफर्म हो जसले मानिसहरूलाई प्लेटफर्ममा आफ्ना भिडियोहरू साझेदारी गर्न र समर्पित दर्शक आधार सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ। यस दर्शकहरूले टिप्पणीहरू पोस्ट गर्न सक्छन्, भिडियोहरू मन पराउँछन्, र आफ्ना साथीहरूसँग सामग्री साझा गर्न सक्छन्।
लाइक, हेराइ र टिप्पणीहरू कुनै पनि YouTube च्यानलका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मेट्रिक्स हुन्। यो किनभने YouTube एल्गोरिदम राम्रो मेट्रिक्स देखाउने च्यानल र भिडियोहरूको पक्षमा डिजाइन गरिएको हो। धेरै लाइक प्राप्त गर्नु भनेको तपाईको सामग्री र च्यानल खोज परिणाम र सिफारिसहरूमा उच्च श्रेणीमा हुने सम्भावना बढी हुन्छ। तपाईंका भिडियोहरूलाई थप लाइकहरू प्राप्त गर्न विभिन्न रणनीतिहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाईं पनि सक्नुहुन्छ यूट्यूब मनपर्दो किन्नुहोस् YTpals बाट, र आफ्नो च्यानल बढ्दै हेर्नुहोस्। यस लेखले YouTube मा मनपर्नेहरूको महत्त्व र तिनीहरूलाई बढाउन तपाईंले प्रयोग गर्न सक्ने विभिन्न रणनीतिहरूबारे छलफल गर्नेछ।
YouTube एल्गोरिदम र लाइकको महत्त्व
YouTube मा प्रयोग गरिएका तीन फरक एल्गोरिदमहरू छन्, जसले सिफारिसहरूको लागि भिडियोहरू चयन गर्न मेट्रिक्स प्रयोग गर्दछ। एउटा एल्गोरिदमले प्रयोगकर्ताको गृह पृष्ठमा प्रदर्शन गर्न निश्चित भिडियोहरू चयन गर्दछ, जबकि अर्कोले दर्शकहरूको लागि अन्य उपयुक्त सिफारिस गरिएका भिडियोहरू पहिचान गर्दछ। तेस्रो एल्गोरिदमको लागि, यसले दर्शकहरूले भिडियो हेर्दा अर्को भिडियो स्वत: सिफारिस विकल्प चयन गर्दछ। जब YouTube ले हाइलाइट गर्नका लागि भिडियोहरू चयन गरिरहेको छ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मापदण्डहरू मध्ये एउटाले यसलाई ध्यानमा राखेको छ भने मनपर्ने संख्या हो। मनपर्नेहरूले खोज परिणामहरू र सिफारिसहरूमा भिडियो रैंकिंग उच्च हुने सम्भावना बढाउँछ। यदि तपाइँको भिडियोले छोटो अवधिमा धेरै लाइकहरू प्राप्त गर्दछ भने, त्यसपछि यसले प्लेटफर्ममा पनि चाँडै लोकप्रियता प्राप्त गर्न सक्छ।
YouTube लाईकहरू च्यानलको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छन्। यसले YouTube एल्गोरिदम र दर्शकहरूलाई तपाईंको दर्शक संलग्नता दरहरू ध्यान दिन लायक छ भनी बताउँछ। तपाईं विश्लेषण खण्ड मार्फत आफ्नो YouTube मेट्रिक्स को एक सिंहावलोकन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईलाई सबैभन्दा धेरै लाइक प्राप्त गरेका र दर्शकले त्यति धेरै दर्शकको संलग्नता नपाएका भिडियोहरूको बारेमा बताउनेछ। जब नयाँ दर्शकहरूले तपाईंका भिडियोहरू हेरिरहेका छन्, तिनीहरूले पनि तपाईंले आफ्ना हालका सदस्यहरू वा दर्शकहरूबाट प्राप्त गरिरहनुभएको संलग्नताको आधारमा आफ्नो निर्णयमा आधारित हुन्छन्।
त्यहाँ कहिलेकाहीँ हुन सक्छ जब तपाइँ तपाइँका भिडियोहरूमा हेराइहरू प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ, तर तपाइँका दर्शकहरूलाई तपाइँको भिडियोहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न पाउनु पूर्ण रूपमा अर्को बलगेम हो। तपाईंले आफ्ना दर्शकहरूलाई समय-समयमा आफ्ना भिडियोहरूसँग संलग्न हुन सम्झाउनु पर्ने हुन सक्छ। तपाईंको दर्शकहरूबाट प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। तपाईंले आफ्ना दर्शकहरूबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त गर्दा, तपाईंका सम्भावित दर्शकहरू बढ्दै जानेछन् र तपाईंका भिडियोहरूले उनीहरूको हकदार पहिचान र विश्वसनीयता प्राप्त गर्न थाल्नेछ।
YouTube लाईकहरूको ठूलो संख्या हुनुको फाइदाहरू
धेरै YouTube लाईकहरू प्राप्त गर्नुका धेरै फाइदाहरू छन्। यहाँ कारणहरूको सूची छ किन धेरै YouTube लाइकहरू एक च्यानलको विकासको लागि महत्त्वपूर्ण छ -
दर्शकहरुलाई आकर्षित गर्न को लागी: दर्शकहरूले उत्कृष्ट सामग्रीमा मनपर्ने र टिप्पणीहरूको महत्त्वपूर्ण मात्रा समावेश हुनेछ भनी अनुमान गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ। भिडियोमा जति धेरै लाइकहरू छन्, त्यति नै बढी ट्राफिक त्यसतर्फ निर्देशित हुनेछ। जब तपाईंको च्यानलका भिडियोहरूमा धेरै लाइकहरू हुन्छन्, यसले दर्शकहरूको नजरमा उनीहरूको विश्वसनीयता बढाउँछ।
सामाजिक उपस्थिति प्रमाणित गर्न को लागी: सामाजिक सञ्जालको अवधारणा एक साधारण सिद्धान्तमा चल्छ - भिडियोमा जति धेरै लाइक वा हेराइहरू छन्, त्यति नै ठूलो सामाजिक शक्ति हुन्छ। प्लेटफर्ममा तपाईंको विश्वसनीयता बढ्छ जब तपाईंसँग धेरै लाइकहरू हुन्छन्। जब तपाईंसँग राम्रो मेट्रिक्स हुन्छ, दर्शकहरूले पनि विश्वास गर्छन् कि तपाईंसँग स्पेसमा थप्नको लागि केही सार्थक छ। यस उद्देश्यको लागि, प्लेटफर्ममा एक आला स्थापना गर्न र विषयमा कमाण्ड विकास गर्न महत्त्वपूर्ण छ। धेरै संख्यामा लाइकहरूले तपाइँको आलामा प्रतिस्पर्धीहरूलाई शासन गर्छ र तपाइँको च्यानललाई अगाडि ल्याउँछ।
बढ्दो रैंकिंग खोज इन्जिन को लागी: यदि तपाइँ YouTube मा कुनै पनि विषयको लागि खोजी गर्नुहुन्छ भने, यो सजिलै देख्न सकिन्छ कि खोज परिणामहरूको सूचीको शीर्षमा रहेको भिडियोहरू ती हुन् जसमा धेरै लाइकहरू छन्। जब तपाइँसँग मनपर्नेहरूको पर्याप्त संख्या हुन्छ, YouTube खोज कोटीमा तपाइँको मार्ग खाली गर्दछ। जब कसैले तपाइँको आलासँग सम्बन्धित विषय खोज्छ, तपाइँको भिडियो सिफारिसहरूमा उच्च हुने सम्भावना बढ्छ।
सफल मार्केटिङ अभियान: धेरै अनलाइन मार्केटरहरूले निश्चित उत्पादनहरू, सेवाहरू, र सामग्रीको प्रचार गर्न YouTube प्रयोग गर्छन्। त्यस्ता कुनै पनि च्यानलका भिडियोहरूले राम्रो सङ्ख्यामा लाइक र भ्युज पाएमा यो तथ्यको सङ्केत हुन्छ। डिजिटल मार्केटिङ अभियान सफल भयो । YouTube मा धेरै लाइकहरू प्राप्त गर्नु भनेको उत्पादन वा सेवाले मानिसहरूलाई मन पराउने कुरा सुनिश्चित गर्ने उत्कृष्ट तरिका हो।
आफ्नो अधिकार बढाउनको लागि: जब दर्शकहरूले तपाईंका भिडियोहरूमा राम्रो संख्यामा लाइक र टिप्पणीहरू छन् भनी देख्छन्, उनीहरूले तपाईंलाई विषयको अधिकारको रूपमा हेर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। उनीहरूले तपाइँको सामग्रीलाई विशेष विषयको बारेमा सही जानकारी प्रदान गर्नमा विश्वास गर्नेछन्। तपाईंको स्थानमा तपाईंको अधिकार बढ्दै जाँदा, तपाईं आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरू भन्दा माथि उठ्न सक्षम हुनुहुनेछ र प्लेटफर्ममा तपाईंको लोकप्रियता बढ्नेछ।
तपाईंको वेबसाइटमा ट्राफिक बढ्दै: धेरै लाइक भएका भिडियोहरूले धेरै हेराइहरू प्राप्त गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ। YouTube भिडियोहरू तपाईंको व्यक्तिगत वा व्यावसायिक वेबसाइटमा ट्राफिक निर्देशित गर्नको लागि उत्कृष्ट हुन सक्छ। YouTube लाईकहरूको ठूलो संख्याको अर्थ धेरै दर्शकहरू छन्, जसको अर्थ कम्पनीको लागि राम्रो सम्भावित नेतृत्व हो।
बढ्दो YouTube सदस्यहरूको लागि: हामीले पहिले नै उल्लेख गरिसकेका छौं कि तपाईका भिडियोहरूमा धेरै संख्यामा लाइक र कमेन्टहरू हुनुको मतलब तपाई अझ धेरै दर्शकहरूलाई आकर्षित गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। जति धेरै मानिसहरूले तपाइँको सामग्री हेर्न थाल्छन्, उनीहरूले तपाइँको सामग्रीको सदस्यता लिन सुरु गर्नेछन्। यसरी, तपाईंले YouTube लाईक मार्फत धेरै सदस्यहरू प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
तपाईंका भिडियोहरूका लागि थप YouTube लाइकहरू प्राप्त गर्नका लागि सुझावहरू
YouTube बाट मुद्रीकरण लाभहरू प्राप्त गर्न, लक्षित दर्शकहरूसँग संलग्न हुनु महत्त्वपूर्ण छ। एक आकर्षक दर्शक आधार निर्माण गर्न समय र प्रयास लाग्छ। बढ्दो च्यानलहरूको सामना गर्ने सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको मानिसहरूलाई भिडियोहरूसँग अन्तरक्रिया गराउनु हो। यो सम्भव छ कि तपाईंसँग धेरै मानिसहरूले तपाईंको भिडियोहरू हेरिरहेका छन्, तर तिनीहरूमध्ये धेरैले लाइक छोडिरहेका छैनन्। त्यसैले तपाईंले आफ्ना दर्शकहरूलाई टिप्पणीहरू पोस्ट गर्न र तपाईंको भिडियोहरू मन पराउन सोध्ने निरन्तर रिमाइन्डरहरू समावेश गर्नुपर्छ। यस तरिकाले, तपाइँ YouTube मा तपाइँको संलग्नता विश्लेषणलाई बढावा दिन सक्षम हुनुहुनेछ।
निम्न खण्डमा, हामी तपाईंलाई तपाईंको भिडियोहरूमा लाइकहरूको संख्या बढाउनको लागि धेरै सुझावहरू प्रदान गर्नेछौं। यी सुझावहरू प्रयोग गरेर तपाईंले प्लेटफर्ममा संलग्नता दरहरू बढाउनको लागि आफ्नो रणनीति विकास गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँको YouTube लाईकहरू बढाउनको लागि अर्को विकल्प छ, जुन तपाइँ यी सुझावहरू लागू गर्नुको अतिरिक्त समावेश गर्न सक्नुहुन्छ। यो भरपर्दो स्रोतहरूबाट YouTube लाईकहरू खरिद गरेर हो। जब तपाइँ YouTube लाईकहरू खरिद गर्नुहुन्छ, तपाइँ तपाइँको च्यानलको बृद्धि सुनिश्चित गर्न सक्नुहुन्छ र केहि समय मा तपाइँ तपाइँको सामग्री संग संलग्न वास्तविक दर्शकहरु र सदस्यहरु लाई देख्न सुरु गर्नुहुनेछ।
भिडियो सामग्री द्वारा बढ्दो लाइक
यदि तपाइँ YouTube मा धेरै लाइकहरू प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, यो सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि तपाइँको भिडियो सामग्री स्क्र्याच सम्म छ। यहाँ थप YouTube लाईकहरू प्राप्त गर्नको लागि तपाईंको भिडियो सामग्री सुधार गर्न केही सुझावहरू छन्।
1. मनोरञ्जनात्मक र शैक्षिक सामग्री सिर्जना गर्नुहोस्
मानिसहरू विभिन्न कारणले YouTube मा आउँछन्। कहिलेकाहीं, तिनीहरू एक विषयको बारेमा केहि सिक्न चाहन्छन् र अन्य समयमा तिनीहरू केवल मनोरञ्जन गर्न चाहन्छन्। जब तपाइँ प्लेटफर्ममा भिडियोहरू सिर्जना गर्नुहुन्छ, यो सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि तपाइँ दर्शकहरूलाई उनीहरूको आवश्यकता अनुसार सबै भन्दा राम्रो मूल्य प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। एकै समयमा, तपाईंले गुणस्तरमा सम्झौता गर्नु हुँदैन। तपाईले किवर्ड अनुसन्धान प्रदर्शन गरेर दर्शकहरूले के हेर्न चाहन्छन् भनेर जान्न सक्नुहुन्छ। YouTube मा सबैभन्दा धेरै खोजिएका विषयहरू खाना, मनोरञ्जन, संगीत, खेलकुद, खेलकुद, यात्रा, खेलकुद, सौन्दर्य र फेसन हुन्। वैकल्पिक रूपमा, तपाइँ एक अनलाइन सर्वेक्षण सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ। साथै, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँका भिडियोहरूको ढाँचा तपाइँको दर्शकहरूको स्वाद संग प्रतिध्वनित छ। तपाईं कसरी गर्ने भिडियोहरू, उत्पादन समीक्षाहरू, अनबक्सिङ, शीर्ष 10, उत्पादन ढुवानी, प्रश्नोत्तर, आदि बनाउने विचार गर्न सक्नुहुन्छ।
2. भाइरल प्रवृतिहरूमा एक नजर लिनुहोस्
तपाईंले पहिले नै प्रचलनमा रहेको विषयमा आधारित भिडियोहरू सिर्जना गरेर आफ्नो सामग्रीमा राम्रो मात्रामा लाइकहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यस तरिकामा, तपाईं प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भाइरल प्रवृत्तिहरू तपाईंको फाइदाको लागि। जब कुनै विषय भाइरल हुन्छ, मानिसहरू यसको बारेमा थप जान्न चाहन्छन्। उदाहरणका लागि, तपाईं आइस बकेट चुनौतीको उदाहरण लिन सक्नुहुन्छ। जब चुनौती पहिलो पटक बाहिर आयो, मानिसहरूले यसको बारेमा थप जान्न चाहन्थे किनभने उनीहरूले धेरै सेलिब्रेटीहरूले यस्तै प्रयास गरेको देखे। तपाईं समाचार र लोकप्रिय संस्कृतिमा प्रचलनमा रहेका विषयहरूमा आफ्ना भिडियोहरूलाई पनि केन्द्रित गर्न सक्नुहुन्छ। लोकप्रिय प्रवृतिहरूसँग तपाइँको भिडियोहरू बाँध्न सधैं सजिलो हुँदैन, तथापि, तपाइँ थप प्रासंगिक सामग्री सिर्जना गरेर प्लेटफर्ममा तपाइँको मनपर्नेहरू बढाउन सक्नुहुन्छ।
3. YouTubers संग सहकार्य
तपाईंको भिडियोहरूमा लाइक र टिप्पणीहरू पोस्ट गर्न थप दर्शकहरूलाई ड्राइभ गर्ने अर्को उत्कृष्ट तरिका अन्य YouTubers सँग सहकार्य गर्नु हो। तपाइँ तपाइँको भिडियोहरूमा उद्योग प्रभावकारीहरू देखाएर दर्शकहरूबाट उत्कृष्ट संलग्नता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो किनभने यी प्रभावकारीहरूले तपाइँलाई पहिले नै स्थापित दर्शक बनाउँछन्। जब तपाइँ अन्य YouTubers सँग सहकार्य गर्नुहुन्छ, तपाइँ उनीहरूका दर्शकहरूलाई तपाइँको च्यानल पनि जाँच गर्न प्रोत्साहित गर्नुहुन्छ।
धेरै हेराइको मतलब अधिक लाइक र टिप्पणीहरू हुनेछ। तपाइँका दर्शकहरूलाई थप्नुको अतिरिक्त, YouTubers सँग सहकार्यले तपाइँको आलाको विषयमा अर्को परिप्रेक्ष्य प्रदान गर्न सक्छ। यसले YouTube स्पेसमा तपाईंको च्यानललाई थप अधिकार दिन्छ। अन्य YouTubers सँग सहकार्य पारस्परिक रूपमा लाभदायक हुन सक्छ, किनकि यसले दुबै च्यानलहरूमा मनपर्ने र संलग्नता दरहरू बढाउनेछ।
4. YouTube कार्डहरू
तपाईंले आफ्नो भिडियो हेर्नको लागि थप दर्शकहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र अन्ततः YouTube कार्ड सुविधा प्रयोग गरेर थप टिप्पणीहरू र लाइकहरू पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। YouTube कार्डहरूले तपाइँलाई भिडियो भित्र तपाइँको अन्य भिडियोहरू प्रवर्द्धन गर्न सक्षम गर्दछ। तपाईं YouTube कार्डहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ -
आफ्नो च्यानलबाट अन्य भिडियोहरू प्रचार गर्न
मानिसहरूलाई लाइक छोड्न सम्झाउनको लागि
प्रयोगकर्ताहरूलाई मतदान भर्न प्रोत्साहित गर्नको लागि
दर्शकहरूलाई तपाईंको उपहार ल्यान्डिङ पृष्ठमा निर्देशित गर्न
एक गैर-नाफा दान को लागी
थप च्यानल सदस्यहरू प्राप्त गर्नको लागि
तपाईंको वेबसाइटमा ट्राफिक पठाउन
YouTube कार्डहरू कम हेराइ र लाइकहरू भएका तपाईंको कम प्रदर्शन गर्ने भिडियोहरूलाई प्रवर्द्धन गर्नको लागि उत्कृष्ट हुन सक्छ। तपाइँको YouTube मा कार्डहरू थप्नको लागि, YouTube विश्लेषण खण्डबाट हेराइहरू कुन बिन्दुमा घट्छ भनेर हेर्नु महत्त्वपूर्ण छ। त्यो बिन्दु भन्दा ठीक अगाडि YouTube कार्डहरू थप्नु राम्रो विचार हुनेछ।
5. भिडियो अन्तिम स्क्रिनहरू
तपाईंले आफ्नो YouTube च्यानलमा कल टु एक्शन समावेश गर्न अन्तिम स्क्रिन सुविधा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ दर्शकहरूलाई तपाइँको च्यानलको बारेमा थप जानकारी दिनको लागि अन्तिम स्क्रिन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, र तपाइँ तिनीहरूलाई तपाइँको भिडियोहरू मन पराउन अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ। अन्तिम स्क्रिनहरू अर्को कुन भिडियो हेर्ने भनेर सुझाव दिन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस तरिकाले, तपाइँ तपाइँका दर्शकहरूलाई तपाइँका केहि भिडियोहरूमा निर्देशित गर्न सक्षम हुनुहुनेछ जुन विगतमा कम हेराइ र लाइकहरू प्राप्त गरेका छन्। आफ्नो भिडियोमा अन्तिम स्क्रिनहरू थप्नको लागि तपाईंले YouTube स्टुडियो नेभिगेट गर्नुपर्छ र भिडियो विवरणहरू हेर्नको लागि पेन्सिल आइकनमा क्लिक गर्नुपर्छ। त्यो खण्डमा, तपाईंले अन्त्य स्क्रिन विकल्प पाउनुहुनेछ। तपाईले नीलो प्लस विकल्पबाट तपाईले चाहानु भएको अन्तिम स्क्रिनको प्रकार थप्न छनौट गर्न सक्नुहुन्छ, र त्यस पछि, तपाईले बचतमा क्लिक गर्नु पर्छ।
6. सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरूमा भिडियोहरूको क्रस-प्रवर्धन
YouTube मा लाइक बढाउने अर्को उत्कृष्ट तरिका भनेको अन्य अनलाइन सोशल मिडिया प्लेटफर्महरूमा तपाइँका भिडियोहरूलाई प्रचार गर्नु हो। फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटर जस्ता धेरै अन्य सामाजिक सञ्जालहरूमा भिडियो सामग्री पनि छ। यी च्यानलहरू हेराइ, लाइक, र सदस्यहरूको संख्या बढाउनको लागि तपाईंको भिडियोहरूलाई क्रस-प्रमोट गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। इन्स्टाग्राममा, तपाइँ तपाइँको YouTube भिडियोहरूको टिजरहरू साझेदारी गर्न र तपाइँको बायोमा भिडियोमा लिङ्क थप्न कथाहरू सुविधा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको YouTube भिडियोहरू क्रस-प्रमोट गर्नु भनेको तपाईंका अनुयायीहरूलाई YouTube मा सक्रिय समुदाय छ र तिनीहरू पनि त्यसको एक हिस्सा हुन सक्छन् भनी देखाउने राम्रो तरिका हो। नयाँ दर्शकहरूले तपाईंको भिडियोहरू हेर्दा, उनीहरूले थप टिप्पणीहरू र लाइकहरू पोस्ट गर्नेछन्।
SEO द्वारा बढ्दो लाइक
यदि तपाइँ प्लेटफर्ममा तपाइँका दर्शकहरू र संलग्नता बढाउन चाहनुहुन्छ भने, खोज इन्जिन अप्टिमाइजेसन (SEO) प्रविधिहरू बारे जान्न महत्त्वपूर्ण छ। YouTube एल्गोरिथ्मले केहि कारकहरूको आधारमा खोज इन्जिनहरूमा सामग्री फिल्टर गर्दछ। तसर्थ, तपाइँको शीर्षक, ट्याग, र भिडियोहरूको विवरण अप्टिमाइज गर्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यहाँ SEO द्वारा तपाइँको YouTube भिडियोहरूमा लाइक बढाउने केही तरिकाहरू छन्:
1. भिडियो शीर्षकहरू सिर्जना गर्दै जुन कीवर्ड रिच छन्
तपाईंको सामग्री लक्षित दर्शकहरूमा पुग्छ भनेर सुनिश्चित गर्न कीवर्ड अनुसन्धान आवश्यक छ। तिनीहरू वाक्यांश र शब्दहरू हुन् जुन मानिसहरूले सामग्री खोज्न प्रयोग गर्छन्। जब तपाइँ तपाइँको सामग्री लक्षित कुञ्जी शब्दहरू वरिपरि शिल्प गर्नुहुन्छ, तपाइँ सुनिश्चित गर्न सक्नुहुन्छ कि खोज इन्जिनहरूले तिनीहरूलाई लक्षित दर्शकहरूलाई सिफारिस गर्दछ। तपाईंको शीर्षकमा सान्दर्भिक किवर्डहरू थपेर थप हेराइहरू र लाइकहरू प्राप्त गर्ने मौकाहरू बढाउनको लागि। यस तरिकाले, तपाइँका दर्शकहरूले तपाइँको सामग्री अझ सजिलै फेला पार्न सक्षम हुनेछन्। त्यहाँ धेरै खोजशब्द अनुसन्धान उपकरणहरू अनलाइन उपलब्ध छन् जुन सान्दर्भिक किवर्डहरू फेला पार्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। YouTube-विशेष कुञ्जी शब्दहरू फेला पार्ने अर्को तरिका खोज पट्टीमा विषय प्रविष्ट गरेर हो। कुञ्जी शब्दहरू भविष्यवाणी गरिएका वस्तुहरू हुन् जुन तपाईंले विषय खोज्दा पप अप हुन्छ। यी भविष्यवाणी गरिएका शब्दहरू अधिकांश दर्शकहरूले खोजिरहेका छन्।
२. भिडियो विवरणहरूमा कुञ्जी शब्दहरू थप्नुहोस्
तपाईंले भिडियो शीर्षकहरू जस्तै आफ्नो भिडियो विवरणहरू अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो विवरण भनेको त्यो क्षेत्र हो जहाँ दर्शकहरूले तपाइँका भिडियोहरू के हो भनेर जान्छन्। यो सान्दर्भिक कुञ्जी शव्दहरूको प्रयोग गरेर खोज परिणामहरूमा तपाइँको रैंकिंग बढाउन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। कीवर्ड रणनीति प्रयोग गरेर तपाईंले क्लिक-थ्रु दर मात्र सुधार गर्नुहुनेछैन तर तपाईंको मनपर्ने र दृश्यहरू पनि बढाउनुहुनेछ। भिडियो विवरण यसरी ड्राफ्ट गरिनु पर्छ कि यसले श्रोताको चासो लिन्छ, जबकि अझै उपयोगी किवर्डहरू समावेश गर्दछ।
3. YouTube भिडियोहरूमा ट्यागहरू थप्नुहोस्
YouTube मा भिडियो ट्यागहरू खोज एल्गोरिथ्ममा तपाईंको सामग्री वर्गीकरण गर्नका लागि उत्कृष्ट छन्। यसले तपाईंको भिडियोले कुन विषयलाई लक्षित गरिरहेको छ भनी बुझ्न मद्दत गर्छ। भिडियो शीर्षक र विवरणको अतिरिक्त, भिडियो ट्यागहरू तपाईंको भिडियोहरूको लागि उपयुक्त रूपमा प्रयोग गरिनुपर्छ। तपाइँ तपाइँको आला मा सान्दर्भिक को एक समझ को विकास गर्न को लागी प्रतियोगीहरु द्वारा प्रयोग गरिएको भिडियो ट्यागहरु लाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि भिडियोमा ट्यागहरू हेर्नको लागि, निम्न चरणहरू पालना गर्न सकिन्छ -
कुनै पनि वेब ब्राउजर प्रयोग गरेर YouTube भिडियोमा जानुहोस्।
पृष्ठमा दायाँ क्लिक गर्नुहोस् र "पृष्ठ स्रोत हेर्नुहोस्" चयन गर्नुहोस्।
Ctrl + F (विन्डोजको लागि) वा Command + F (म्याकको लागि) थिच्नुहोस्। एक स्रोत कोड आउनेछ जुन त्यसपछि किवर्ड खोज्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
त्यसपछि तपाइँ त्यो भिडियोको लागि प्रयोग गरिएका ट्यागहरूको सूची हेर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
4. आफ्नो फाइदाको लागि थम्बनेल छवि प्रयोग गर्नुहोस्
तपाइँ तपाइँको भिडियोहरु को थम्बनेल छविहरु लाई अप्टिमाइज गरेर तपाइँको भिडियोहरु को लागी अधिक लाइक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। थम्बनेल छविहरू तपाईंको भिडियोलाई YouTube गृहपृष्ठ, सुझाव गरिएको भिडियो सूची, खोज इन्जिन भिडियो नतिजाहरू, र सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि फरक बनाउनको लागि महत्त्वपूर्ण छन्। तपाईंको भिडियोमा एक आँखा समात्ने थम्बनेल भएकोले धेरै मानिसहरूलाई तपाईंको सामग्रीमा टिप्पणीहरू र लाइकहरू हेर्न र पोस्ट गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्छ। भिडियोहरूको लागि सिफारिस गरिएको आकार लगभग 1280×720 छ, जसको न्यूनतम चौडाइ 640 पिक्सेल हुनुपर्छ। पढ्न योग्यता बढाउन उच्च गुणस्तरका छविहरूमा आकर्षक फन्टहरू हुनुपर्छ। तपाईं दर्शकहरूसँग भावनात्मक सम्बन्ध जगाउन अनुहारहरूको लागि क्लोज-अपहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। थम्बनेल तपाईंको भिडियो सामग्रीसँग मेल खानुपर्छ। थम्बनेलहरू अनुकूलन गर्न क्लिकबेट ह्याकहरू प्रयोग गर्नु कहिल्यै राम्रो विचार होइन किनकि यसले दर्शकहरूलाई बहकाउँछ।
5. भिडियो ट्रान्सक्रिप्सन प्रयोग गर्नुहोस्
भिडियो ट्रान्सक्रिप्सनहरूलाई YouTube मा बन्द क्याप्शन भनिन्छ। भिडियो ट्रान्सक्रिप्सनहरूले प्लेटफर्ममा तपाईंको भिडियोको श्रेणी सुधार गर्न र तिनीहरूलाई थप पहुँचयोग्य बनाउन सक्छ। बन्द क्याप्शनहरू प्रयोग गरेर, धेरै दर्शकहरूले तपाईंको भिडियोहरू हेर्न सक्छन्। यो किनभने श्रोताहरूको ठूलो अनुपात एउटै भाषा नबोल्ने वा तिनीहरूको श्रवण कमजोरी हुन सक्छ। बन्द क्याप्शनहरू समावेश गरेर, तपाईंले भिडियोहरूलाई अझ बढी पहुँचयोग्य बनाउनुहुन्छ र थप दर्शकहरूलाई तपाईंको सामग्रीसँग संलग्न हुन र टिप्पणीहरू र लाइकहरू पोस्ट गर्न आमन्त्रित गर्नुहुन्छ।
YouTube लाईकहरू खरिद गर्दै - महत्व र फाइदाहरू
युट्युब लाईक को महत्व माथि उल्लेखित बिन्दुहरु मा पहिले नै बताईएको छ। तपाईंका भिडियोहरूका लागि थप लाइकहरू प्राप्त गर्ने एउटा तरिका भनेको तपाईंका दर्शकहरूलाई तपाईंको च्यानलमा लाइक, सेयर र सदस्यता लिन सोध्नु हो। जे होस्, कहिलेकाहीँ तपाईंले सबै माथि उल्लिखित रणनीतिहरू प्रयोग गरेपछि पनि आफ्ना दर्शकहरूबाट आवश्यक संलग्नता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। यस्तो अवस्थामा, YTpals जस्ता भरपर्दो सेवा प्रदायकहरूबाट YouTube लाईकहरूको लागि भुक्तानी गर्नु राम्रो विचार हुनेछ।
YouTube लाईकहरू खरिद गर्नाले तपाईंलाई दर्शकहरूको एक स्थिर स्ट्रिम प्राप्त गर्नेछ, जसले अन्ततः धेरै मानिसहरूलाई तपाईंको च्यानलको सदस्यता लिन र तपाईंको सामग्रीसँग संलग्न हुन प्रोत्साहित गर्न मद्दत गर्नेछ। तपाईंका भिडियोहरूले नयाँ दर्शकहरूका लागि एक्सपोजर प्राप्त गर्न सक्छन्, जसले अन्यथा तपाईंको च्यानल पत्ता लगाउन सक्षम हुने थिएन। आउनुहोस्, YouTube लाईकहरू किन्नुका केही फाइदाहरू हेरौं।
1. प्लेटफर्ममा तपाईंको च्यानल सामाजिक प्रमाण दिन्छ
यदि तपाइँ तपाइँको भिडियो भाइरल बनाउन र भिडियो सामग्री मार्केट गर्न चाहनुहुन्छ भने, यो प्लेटफर्ममा केहि अधिकार हुनु महत्त्वपूर्ण छ। यस लेखमा भनिएको छ, तपाईंको YouTube च्यानलको मेट्रिक्स सुधार गरेर प्लेटफर्ममा लोकप्रियता वा उपस्थिति बढाउन सकिन्छ। YouTube लाईकहरू च्यानलको सामाजिक स्थिति मापनको लागि महत्त्वपूर्ण मेट्रिक हो। जब तपाइँ लाइकहरू खरिद गर्नुहुन्छ, तपाइँ पहिचान प्राप्त गर्न र प्लेटफर्ममा विश्वसनीयता बढाउन सक्षम हुनुहुनेछ। यसले सामाजिक प्रमाणको रूपमा कार्य गर्दछ, जसले तपाईंलाई भविष्यमा थप दर्शकहरू र सदस्यहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ।
2. खोज परिणामहरूमा श्रेणी बढाउनुहोस्
तपाइँको भिडियोहरु को दर्शकहरु लाई बढाउन को लागी सबै भन्दा राम्रो तरीका खोज परिणामहरु मा देखा पर्न को लागी अनुकूलित गरेर हो। हालैको अनुसन्धान अनुसार, YouTube मा 60 प्रतिशत भन्दा बढी दर्शकहरूले च्यानल भ्रमण गर्नुको सट्टा खोज पट्टीमा शीर्षकहरू मार्फत भिडियोहरू खोज्छन्। तपाईंले लाइक, हेराइ र टिप्पणीहरू समावेश गर्ने आफ्नो मेट्रिक्स सुधार गरेर खोज परिणामहरूमा आफ्ना भिडियोहरूको श्रेणी बढाउन सक्नुहुन्छ। जब तपाइँ YouTube लाईकहरू खरीद गर्नुहुन्छ, यसले YouTube एल्गोरिदमलाई सुझाव दिन्छ कि तपाइँको संलग्नता दरहरू उच्च छन्। यस तरीकाले, तपाईले खोज परिणामहरूमा उच्च श्रेणीमा राख्न सक्षम हुनुहुनेछ जब मानिसहरूले तपाईको आलाको शीर्षकमा खोजी गर्छन्। अन्ततः, तपाईंको च्यानलले अर्गानिक ट्राफिक पनि उत्पन्न गर्न सक्षम हुनेछ, जसले संलग्नता दरहरू अझ बढाउँछ।
3. लक्षित दर्शकहरूलाई आकर्षित गर्न
एकचोटि तपाईंले शीर्षकमा भिडियो सिर्जना गरेपछि, तपाईं यो सुनिश्चित गर्न चाहानुहुन्छ कि यो सही दर्शकहरूमा पुग्छ जसले तपाईंको इनपुटको कदर गर्दछ। YTpals जस्ता विश्वसनीय स्रोतहरूबाट YouTube लाईकहरू खरिद गरेर तपाईंले आफ्नो भिडियो लक्षित दर्शकहरूमाझ पुग्छ भनी सुनिश्चित गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईंसँग तपाईंको भिडियोहरूमा लाइक र टिप्पणीहरूको ठूलो संख्या हुन्छ, यसले तपाईंलाई यस विषयमा निश्चित मात्रामा अधिकार छ भनी सङ्केत गर्छ। नयाँ दर्शकहरूले अन्ततः तपाईंले सिर्जना गरिरहनुभएको सामग्रीको प्रकारमा विश्वास गर्नेछन्। लाइकहरू खरिद गर्नु तपाईंको लक्षित दर्शकहरूलाई आकर्षित गर्न उत्कृष्ट रणनीति हो।
4. अन्य सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरूमा ट्राफिक ड्राइभिङको लागि
जब तपाइँ लाइकको लागि भुक्तान गर्नुहुन्छ, यसले प्लेटफर्ममा तपाइँको दृश्यता बढाउँछ। दर्शकहरूले तपाइँको सामग्री सजिलैसँग फेला पार्न सक्छन् र त्यसपछि तपाइँका सदस्यहरूको संख्या निरन्तर बढ्न थाल्छ। YouTube मा तपाईंको दर्शकहरूलाई अन्य सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरूमा निर्देशित गर्न सकिन्छ जहाँ तपाईं समान रूपमा बलियो उपस्थिति स्थापित गर्न चाहनुहुन्छ। यो विशेष गरी तपाइँको उत्पादनहरु को मार्केटिंग को लागी उपयोगी छ यदि तपाइँ एक व्यवसाय को मालिक हुनुहुन्छ। व्यक्तिहरू भिडियो सामग्री तिर गुरुत्वाकर्षण गर्न जान्छन्, त्यसैले तपाईंले YouTube ट्राफिकलाई वेबसाइटमा निर्देशित गर्न सक्नुहुन्छ, जुन उत्पादन वा सेवाहरूको बिक्री बढाउनको लागि धेरै उपयोगी हुन सक्छ।
5. YouTube यात्रा सुरु गर्नको लागि
जब तपाइँ च्यानल सुरु गर्दै हुनुहुन्छ, दर्शकहरूलाई तपाइँको सामग्री हेर्नको लागि प्राप्त गर्न गाह्रो हुन सक्छ। यदि तपाइँ तपाइँको YouTube क्यारियर किकस्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाइँको प्रारम्भिक भिडियोहरूमा संलग्नता प्राप्त गर्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। YouTube लाईकहरू किन्नुले तपाईंलाई सही दिशामा सेट गर्न सक्छ र तपाईंको च्यानलले ऊर्जावान सुरुवात प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछ। यसले प्लेटफर्ममा तपाइँको दर्शक संख्या बढाउनेछ, र समय संग तपाइँको सदस्यहरु तपाइँको सामग्री संग संलग्न रहनेछ। यसले तपाईंको YouTube क्यारियरलाई अर्को स्तरमा लैजान मद्दत गर्न सक्छ।
6. लोकप्रियता प्राप्त गर्दै
यदि तपाइँ YouTube सनसनी बन्न चाहानुहुन्छ भने, YouTube लाईकहरू खरिद गर्नाले तपाइँलाई तपाइँको लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सही ट्रयाकमा सेट गर्न सक्छ। YouTube मा लोकप्रियता प्राप्त गर्दै प्रायोजन सहित मानिसहरूका लागि अवसरहरूको संसार खोल्छ। यदि तपाइँ आकर्षक भिडियोहरू सिर्जना गर्न जारी राख्नुहुन्छ भने, तपाइँ एक समर्पित ग्राहक आधार निर्माण गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। तिनीहरू तपाईंको सामग्रीसँग मात्र संलग्न हुने छैनन् तर यसलाई प्रचार पनि गर्नेछन्।
7. प्रतिस्पर्धामा अगाडि रहन
YouTube एक उच्च प्रतिस्पर्धी प्लेटफर्म हो, जहाँ हरेक दिन लाखौं भिडियोहरू थपिन्छन्। यदि तपाइँ प्रतिस्पर्धाको अगाडि रहन चाहानुहुन्छ भने, तपाइँले केहि रणनीतिहरू प्रयोग गर्नुपर्दछ जसले तपाइँको वृद्धिमा मद्दत गर्नेछ। सम्भावनाहरू तपाइँका धेरै प्रतिस्पर्धीहरूले YouTube लाईक र टिप्पणीहरू खरीद गरिरहेका छन्। तसर्थ, यो किन्न एक राम्रो विचार हुनेछ YouTube लाई मन पर्छ आफ्नो च्यानलको लागि यदि तपाईं कुनै हानिमा हुन चाहनुहुन्न भने।
अब जब तपाइँ YouTube लाईकहरू किन्नुको महत्त्व र फाइदाहरूसँग परिचित हुनुहुन्छ, तपाइँ तपाइँको च्यानलको लागि तिनीहरूको वृद्धिमा मद्दत गर्नको लागि तिनीहरूलाई खरिद गर्ने विचार गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाइँ YTpals बाट लाइकहरू खरीद गर्नुहुन्छ, तपाइँ तपाइँको भिडियोहरूमा दर्शक प्रतिधारण बढाउन सक्षम हुनुहुनेछ। अर्डर गरेको २४ देखि ७२ घन्टापछि नतिजाहरू देखिन थाल्छन्, र लाइकहरू बटको सट्टा वास्तविक व्यक्तिहरूद्वारा डेलिभर हुनेछन्। प्रिमियम YouTube सेवाहरू बारे थप जान्नको लागि तपाईंले आज हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ YTpals.
YouTube मनपर्दो तपाईंको कार्टमा थपिएको छ।